आफ्नो पिसाब बेचौँ, पैसा कमाउँ ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
आफ्नो पिसाब बेचौँ, पैसा कमाउँ !
मङ्गला गाउँपालिकाले प्राङ्गारिक खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा मानव मूत्र सङ्कलनका लागि प्लाष्टिकको ग्यालिन (जर्किन) राखेको छ । शौचालयमा मूत्र विर्सजन गर्नुका साटो स्थानीय र बटुवाले समेत जर्किन (ग्यालिन)मा गर्ने गरेका मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए ।
पशुपालन गर्ने क्रम विस्तारै घट्दो अवस्थामा रहेकाले किसानलाई यो प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्न सिकाइएको रोकाले बताए । “मानव मूत्रबाट तरकारी उत्पादन साह्रै राम्रो हुने रहेछ । बाहिरी जिल्ला गएर हेर्दा रोग पनि नलागेको पाइयो”, उनले भने, “हामीले पनि यस्तै गर्नसके किसानलाई सहज हुन्छ भनी तालीम दियौँ । किसान हौसिएका छन् ।”
अध्यक्ष रोकाका अनुसार एउटै परिवारका सदस्यको पिसाब सङ्कलन गरेर राखेमा सोही दिनमै तरकारी बालीमा हाल्न सकिने र धेरै घरपरिवारको जम्मा गरेमा एक महीनासम्म राखेर बालीमा हाल्न सकिन्छ । शुरुआतमा स्थानीयले जर्किन वा ड्रममा पिसाब सङ्कलन गरेका छन् । तरकारी लगाएको ठाउँमा हाल्ने गरेका छन् । एक लिटर पिसाबमा तीन लिटर पानी हालेर बोटबिरुवा र बालीमा राख्नसकिने उनले बताए ।
अर्मनकी किसान देवकुमारी सापकोटाले गाउँमा पशुचौपाया पाल्न छाडिएको र मल पाउन समस्या भएकाले यसको सट्टामा घरमा तथा सार्वजनिक स्थलमा पिसाब सङ्कलन गरी बालीमा हाल्न थालेको बताए ।
“घरमै पिसाब सङ्कलन गरेर बारीमा हाले उत्पादन बढ्ने र रोग पनि नलाग्ने जानकारी तालीमबाट पाएका छौँ”, उनले भने । “गाईभैँसी पाल्न नसकिएपछि यो तरिका सहज लाग्यो । गाउँलेले सोहीअनुसार मान्छेको मलमूत्र जम्मा गरेर खेतीबालीमा हाल्ने गरेका छौँ”, सापकोटाले भने ।
मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँका अनुसार अगुवा किसानलाई कृषि बालीमा मानव मूत्रसम्बन्धी पाँच दिने तालीम दिइसकेको छ । तालीमपछि किसानले मानव मूत्रबाटै तरकारी फलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका बानियाँले जानकारी दिए।
पशुपालन गर्ने क्रम विस्तारै घट्दो अवस्थामा रहेकाले किसानलाई यो प्रविधिबाट तरकारीखेती गर्न सिकाइएको उनले बताए । “मानव मूत्रबाट तरकारी उत्पादन साह्रै राम्रो हुने रहेछ । बाहिरी जिल्ला गएर हेर्दा रोग पनि नलागेको पाइयो”, उनले भने, “हामीले पनि यस्तै गर्न सके किसानलाई सहज हुन्छ भनी तालीम दियौँ । किसान हौसिएका छन् ।”
बानियाँका अनुसार एउटै परिवारका सदस्यको पिसाब सङ्कलन गरेर राखेमा सोही दिनमै तरकारी बालीमा हाल्न सकिने र धेरै घरपरिवारको जम्मा गरेमा एक महीनासम्म राखेर बालीमा हाल्न सकिन्छ । शुरुआतमा स्थानीयले जर्किन वा ड्रममा पिसाब सङ्कलन गरेका छन् । तरकारी लगाएको ठाउँमा हाल्ने गरेका छन् । एक लिटर पिसाबमा तीन लिटर पानी हालेर बोटबिरुवा र बालीमा राख्न सकिने उनले बताए ।
प्राविधिक बानियाँका अनुसार पिसाबमा क्याल्सियम, फस्फोरस भएकाले रासायनिक मलभन्दा धेरै गुणा राम्रो हुन्छ । घरपरिवारमा भन्दा विद्यालय र सार्वजनिकस्थलमा मावन मूत्र स¬ङ्कलन गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
विद्यालयमा सङ्कलन गर्न सकेमा तरकारीमा हाल्न सकिने र बिक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले निकै प्रभावकारी हुने उनले उनले जानकारी दिए । “हामीले मानव मूत्रलाई खेर जाने वस्तु भनेर खासै वास्ता गर्दैनौँ तर, त्यही चिज राम्रो मल हुन्छ भन्ने बुझेका छैनौँ” उनले भने, “म्याग्दीको लागि यो नयाँ प्रयोग हो ।”